ZCBC - Latest news
Catholic Nun Calls for “more awareness to prevent abuse at any level” in Southern Africa
There is need for “more awareness” about the abuse of minors and vulnerable adults in Southern Africa, a Catholic Nun has said.
Many Catholics Lack Sufficient Knowledge to Safeguard Minors: Baseline Report in Zimbabwe
The report of a baseline pilot study in Zimbabwe’s Catholic Archdiocese of Harare indicates that many people in the Metropolitan See do not have enough knowledge to protect minors and other vulnerable people from abuses.
Caritas Zimbabwe Advocates for “proper capacity building” to Aid Project implementation
Officials of Caritas Zimbabwe’s Catholic Dioceses are advocating for “proper capacity building” of those involved in implementing projects in the Southern African nation amid “general donor-fatigue amongst our donors”.
Catholic Church farms in Zimbabwe are expected to become more viable by growing crops that will later be canned or crushed to produce jam after members of the Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference (ZCBC) signed a contract with Cashel Valley, a Zimbabwean food company.
Let 2022 By-Elections Reflect Nation “united in diversity”: Christian Leaders in Zimbabwe
Christian Leaders in Zimbabwe under the auspices of Zimbabwe Heads of Christian Denominations (ZHOCD) are calling on the people of God in the Southern African nation to pray for the forthcoming by-elections to reflect a country “united in diversity.”
“Christians must soak elections with prayers”: Christian Denominations in Zimbabwe
Officials of the Zimbabwe Heads of Christian Denominations (ZHOCD) are calling on the people of God in the Southern African nation to “soak” the 2023 general election process “with prayers.”
Church Farms in Zimbabwe to Become “profitable” after Bishops Sign Deal to Supply Wheat
Thousands of hectares of Catholic Church farms in Zimbabwe are to be put into “profitable and productive use” by growing millions of kilograms of wheat to be used for the production of bread in the Southern African nation, a statement by Catholic Bishops indicates.
The recognition of a staff of the Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference (ZCBC) as one of the best Human Resource (HR) Managers in the Southern African nation has been described as “a show of vote of confidence” in the work that the Church leadership is carrying out in the country.
Catholic Bishops in Zimbabwe Launch Agricultural Value Chain to Foster Self-Sustainability
Catholic Bishops in Zimbabwe have launched an agricultural “Economy Value Chain”, an “ambitious” initiative that is expected to help promote self-sustainability among the people of God in the Southern African nation.
On the International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims marked March 24, members of a Christian organization in Zimbabwe that promotes peace have expressed their displeasure at the tendency to politicize development agenda in the Southern African nation.
Ahead of Advent Season, Bishops in Zimbabwe Call for Reconciliation, Unity
As Catholics across the world prepare to usher in the Season of Advent on Sunday, November 29, Bishops in Zimbabwe have, in their collective message about the period that leads up to Christmas and a hopeful anticipation of the second coming of Jesus Christ, called reconciliation and unity in the Southern African nation.
A Catholic Bishop in Zimbabwe has termed as “unconstitutional” the move by President Emerson Mnangagwa-led Government to enroll “junior (medical) doctors” into the army before they are allowed to work in State hospitals.
Catholic Bishops in nine Southern African countries have rallied behind their counterparts in Zimbabwe who have come under attack from the country’s political leadership over their recent Pastoral Letter in which they called on the government to address economic and political challenges bedeviling the country.
After Bishops’ Letter in Zimbabwe Draws Criticism, Catholic Professionals Show Solidarity
Members of the Catholic Professional Network of Zimbabwe (CPNZ) have expressed their solidarity with the Catholic Bishops in the country after their recent Pastoral Letter drew criticism from the Southern African nation’s leadership.
Church Leaders in Zimbabwe Plan Meeting Politicians to Discuss Country’s Crises
Church leaders from various Christian denominations under the Zimbabwe Council of Churches (ZCC) have planned “a closed-door meeting” with “leaders of political parties” at the beginning of next week to deliberate on challenges bedeviling the Southern African nation, key among them, the economic collapse and the political stalemate.